Je continuerai – Tsodrano
Alahady fahaefatra – Advento 2018
Ny bokin’i Mika 5 : 1 – 5 no vakitenintsika androany.
Ny tananan’i Betlehema no voalaza ao. Tanana malaza.
Ny dikany: ( avy amin’ny teny hebreo)
Beth : Tanana (ville)
Lehem: Mofo (pain)
Mazava ho anao ny tian’i Mika mpaminany ho lazaina amin’izao fiomanana ny amin’ny fetim-pifaliana Noely izao. Mahaiza mizara ny mofo izay nomena ho anao maimaim-poana . Ny mofon’aina avy amin’i Jesosy Kristy.
Fa indro jereo ity sary manaraka eto ity.
Ny TOMPO ho aminao (2)
Efa hatrizay ny fahazavana